आजको राशिफल - Baikalpikkhabar
श्री शालिवाहनीय शाके १९४२ ने. सं. १८४१ वि.सं. २०७८ साल वैशाख १० गते शुक्रबार, २३ अप्रिल २०२१ । राक्षस संवत्सर चैत्र शुक्लपक्षको एकादशी तिथि २२ः०४ बजेसम्म, उप्रान्त द्वादशी, नक्षत्र मघा ७ः५७ बजेसम्म, उप्रान्त पूर्वफाल्गुनी, चन्द्रमाराशि सिंह, सूर्योदय ५ः३१ र सूर्यास्त ६ः३२ बजे हुनेछ ।
अस्वस्थताले लक्ष्य प्राप्तिमा विलम्ब हुनेछ । नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खनु होला ।
वस्त्र तथा आभूषणको व्यापार–व्यवसायबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। विद्यामा सफलता मिल्नेछ ।
पहिलेको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । परिस्थितिले अप्ठ्यारोमा परिनेछ ।
जग्गा–जमिनको कारोबारबाट हानि नोक्सानी हुनेछ । धनको सदुपयोग नगर्दा पछुतो हुनेछ ।
प्रेमसम्बन्धमा रहनेको लागि समय राम्रो छ । वैदेशिक यात्राको अवसर आउन सक्छ ।
आखाँसम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ । सवारी साधन चलाउँदा विचार पु¥याएर चलाउनु होला ।
सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । यात्रा गर्दा विशेष ध्यान दिएर गर्नु होला ।
आज आफन्तसँग मनमुटाव बढ्ला । सामान हराउन सक्नेछ । आफूलाई कमजोरी भएको अनुभूति हुनेछ ।
एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । नोकरी गर्नेले मानसम्मान पाउनेछन् ।
वस्त्र तथा आभूषणको व्यापार–व्यवसायबाट लाभ हुनेछ। आफन्तजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
राजनैतिक क्षेत्रमा असफल भइनेछ । मन खिन्न रहला । पेटसम्बन्धी समस्याले सताउनेछ ।
घर निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा सफलता मिल्नेछ । पढाइमा रुचि बढ्नेछ । यात्रा सफल रहला ।
शुक्रबार, १० बैशाख, २०७८, बिहानको ०८:२६ बजे